Iintsingiselo zeKhadi leWands Tarot | Ukufundwa kweTarot - Iintsingiselo Zekhadi Letarot
Iintsingiselo zeKhadi leWands Tarot
I-Ace yeWands Tarot Uluhlu lweziqulatho
I-Ace yeeWands ithe tye
I-Ace yeeWands ibuyisiwe
Ukubonakaliswa kwamanani kwi-Ace yeeWands
Ikhadi le-Ace yeWands lelotot ziindaba ezilungileyo ngokuqala kwalo naluphi na uhlobo!
Yonke into isendaweni elungileyo. Ukuqala, indalo iphela iyakusikelela ngenkuthazo kunye namandla okuyila.
Zonke iinkqubo ziyahamba!
Jonga ukubengezela isilivere isibhakabhaka kunye luhlaza Ukuma komhlaba kwikhadi le-Ace yeWands. Isilivere ifuzisela ukuphefumlelwa kunye nokuqonda. Imihlaba echumileyo inkcenkceshelwe kukucaca, luhlaza umlambo ngumhlaba ogqibeleleyo wemizamo emitsha.
Ukuya phambili kwikhadi le-Ace yeWands, inqaba ende kwinduli ithembisa impumelelo kunye nokufezekiswa okukhulu. Uluhlu lweentaba kumgama lufanekisela ukuqonda kwengqondo kunye nokuqonda kokomoya.
Ngamafutshane, ikamva likhangeleka liqaqambile.
Ngelixa yonke into ilungelelaniswe ngokugqibeleleyo, i mhlophe Isandla esikhazimlayo esifikelela kwilifu kwi-Ace yeWands sibonisa ukuba intsikelelo kaThixo ilapha iyasebenza, nayo: i-wand.
Akukho xhala, ayisiyiyo 'yonyango' entloko!
Iimpawu zinxulunyaniswa ne into yomlilo , amandla agcina indalo yonke ihamba. Ngale ngqiqo, umlilo unika ubomi. Yiyo loo nto amagqabi ekhula kwi iiwands kwi-tarot . Ngelixa unokutshabalalisa, umlilo uyanceda ukugcina nokuphucula ubomi, xa usetyenziswa ngobulumko. Ukukwazi kwethu ukusebenzisa umlilo ukupheka kunye nokufaka amandla kwiinjini, umzekelo, yenye yezinto ezisenza sahluke kwezinye izilwanyana .
Amanxweme adibaniswa nomlilo ngenxa yokuba uPrometheus, isihloko kwiintsomi zamaGrike, wachukumisa intonga elangeni xa wayebe kwizithixo njengesipho eluntwini.
Kwikhadi le-Ace yeWands tarot, amagqabi ali-10 akhula kwi-wand abonisa amandla akhe aphilayo. Zibhekisa kuMthi woBomi weKabbalistic, uphawu lwehlabathi. Amagqabi ama-8 awela emhlabeni, atshintsha abe ngoonobumba besiHebhere Yud njengokuba behla. Kabbalistically, eli nani libhekisa kuMercury, uthixo womlingo. Ileta Yud ibonisa ukuba le yintsikelelo kaThixo.
iphi i-horons entsha ngoku?
Amandla omlilo ngokwenene ayimilingo.
I-Ace ethe tye yeeWands Tarot Card intsingiselo
Qalisa ukuvuselela injini yakho! Ikhadi le-Ace yeWands tarot lifana neflegi ye-cosmic checkered, kwaye sele iza kulahla.
Ukuba uhlala ugxile kwinjongo yakho, akukho ndlela uyakuphulukana nalo mdyarho.
Nantoni na oza kuyiqala, awunakuba nethemba lokuba iimeko zokuqala zingcono. Njengebhonasi engalindelekanga, indalo iphela yongeze i-octane eyongezelelweyo kwitanki lakho.
Inkqubo ye- Isuti yeeWands konke malunga namandla okuyila. I-Ace yeeWands inamandla ngakumbi kuye nakubani na osebenza kwicandelo lokuyila. Ukuba ubukhe wanengxaki yebhloko yombhali, kungcono uchithe elo xesha ngokwakha-njengokugcina iipeni kunye nephepha kwivenkile yokubhala yendawo. Inoveli ye-epic okanye umjikelo wemibongo yothando sele ikuxelela ukuba uxakeke. Qengqa imikhono yakho, wolule kakuhle, kwaye uqale ukubhala!
Ukuba ubuzingela umsebenzi, qala uku-ayina ezona mpahla zintle kunye nehempe yokunxiba. Usakhumbula indlela yokwenza iqhina? Ezo ziphinda uzithumele sele ziza kuguqulwa kwi-callbacks, kwaye ixesha alinakuba ngcono. Unemvakalelo yokutsala abo bafuna ukuba ngabaqeshi bakho bathi, 'Uqeshiwe!'
Yithi ndlela-ntle ngokungathandabuzekiyo kunye namanqwanqwa amadala! Ikhadi le-Ace Wands tarot lizisa umyalezo wesibindi kunye namandla. Isimo sakho sengqondo siyaphucuka ngokuxhuma kunye nemida, kwaye kuyinyani kumthetho wokutsala, indalo iphendula ngohlobo. Uyazi ukuba umzuzu wakho elangeni ufikile.
Ngalo moya, unokufezekisa nantoni na oyifunayo.
Ukuba ubusokoliswa yimeko okholelwa ukuba ayinathemba, ngequbuliso ufumanisa amadama angenasiphelo wethemba kunye nokusombulula. Ukuzaliswa ngamandla amatsha, uyazi ukuba ungahamba umgama.
Ukuba uyindoda, kwaye iqabane lakho kwaye ubuzama ukufumana umntwana, iindaba ezimnandi zisenokuba zisendleleni kungekudala. Mhlawumbi unokufumana indlela esempilweni yokubhiyozela ukufika okutsha kunokunikezela ngeecigars eofisini.
I-Ace yeeWands eziguqulweyo zeKhadi leTarot
Xa kubuyiselwa umva, ikhadi le-Ace yeWands likhomba kumzuzu wokudideka. Apha, kubalulekile ukugcina intloko yakho emagxeni akho. Awufuni ukuba ukuphazamiseka kwakho kwangoku kunyukele kwisiphithiphithi esigcweleyo. Oko kunokupela into engathandekiyo, kwasekuqaleni kwento enesiqalo esithembisayo.
Amandla e-Ace yeWands akhanya ngokuqaqambileyo, kodwa atshisa ngokukhawuleza. Yenzelwe ukukunika iveni efanelekileyo ukuze uhambe.
Ngandlela thile, ifana nekofu yakho yasekuseni.
Ewe, kuya kukunika amandla kunye nenkuthazo yokushiya indlu yakho kwaye uye emsebenzini. Nangona kunjalo, ukuba ufuna ukuwenza usuku lonke, kuya kufuneka utye ukutya, nawe. Ukutya ikofu kuphela kuya kuphela kwintlekele.
Ukudideka kwakho kunokuvela ngenxa yokukhetha izinto ezininzi ngexesha elinye.
Umzekelo, ukuba ubudlala ngothando nabantu abaliqela ngaxeshanye, musa ukumangaliswa xa amathemba aliqela ebonisa umdla kuwe. Yiyo kuphela ingxaki eyonwabisayo xa uyijongile ngaphandle. Inyani ihlala iphela kwimeko ezihlekisayo kunye neentloni.
Leo indoda kunye ne-sagittarius bathanda ukuhambelana
Inye kuphela indlela yokuphuma: khula, fess up, kunye nethemba lokugqwesa.
Olunye uhlobo lwesiphithiphithi esiboniswe kwikhadi le-Ace yeWands tarot yile nto uArthur E. Waite ayibiza ngokuba 'luvuyo. Olo luhlobo lokonwaba ongenakulibona kuba uxakeke kakhulu kukuxhalabela enye into. Nokuba buxakeke kangakanani ubomi bakho ngalo mzuzu, ungasoloko uthatha imizuzu emihlanu kwishedyuli yakho ukubonakalisa kwizinto ezininzi onokuba nombulelo ngazo.
I-Ace ebuyisiweyo yeWands ikwacebisa ukuba kukho into eza kufikelela esiphelweni. Kodwa oko akusoloko kuyinto embi. Ngapha koko, kukho amaxesha amaninzi apho ukuphela kwento ethile kupela iindaba ezimnandi kakhulu: njengokukhangela umsebenzi, ukuhombisa, okanye ukuhlala esibhedlele.
I-Ace yeWands Tarot Card yokuNxibelelana kweMetaphysical:
I-Ace yamakhadi eWands kunye neTarot Numerology
Ikhadi leetot le-Ace yeWands linxibelelana neentsingiselo kunye nesimboli ye Inombolo 1 . I-Kabbalistically, iyahambelana ne-spark kaThixo. Kwinombolo yesiko lokubala, ezo zinxulunyaniswa namandla okuvelisa elanga. Xa la mandla edityaniswa kwi into yomlilo , bakunika i-oomph eyongezelelweyo oyifunayo ukuze usete izinto ezinkulu xa ushukuma.
ubuntu bomfazi waselibra
ukuba ngaba i-virgo idala i-virgo
Indoda eyi-sagittarius kunye ne-taurus ebhedini
capricorn indoda kunye nomhlaza umfazi ebhedini